Avan Xero – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
အဆိုပါ Avan Motors က Xero အိန္ဒိယကနေလျှပ်စစ် Scooter ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးထံမှလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 2015 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပံ့ထံအပ်နှံသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် Eco-friendly mobility ဖြေရှင်းနည်းများ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီက၏ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံမှနဲ့ R & D ကိုစက်ရုံရှိပါတယ်။
အိန္ဒိယ 2018. နောက်တစ်နေ့အကြီးမားဆုံးစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုထက် 19 သန်းရောင်းအားနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုင်ကယ်များအတွက်အကြီးမားဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်တယ်, တရုတ်, အိန္ဒိယက 2030 လျှပ်စစ်မှဆိုင်ကယ်များ၏ရောင်းအားကန့်သတ်ရန်စလေိုကွောငျးကြေညာလိုက်ပါတယ် 2018. 17 သန်းပေါင်းများစွာဆိုင်ကယ်ရောင်းချခဲ့သည်။ Avan Motors ကအိန္ဒိယတွင်လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များအတွက်ပထမဦးဆုံးရှေ့ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Xero Avan Motors က၏ပထမဦးဆုံးလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter တစ်ဦးထုပ်မပါဘဲအသုံးပြုရန် 25km / h ကန့်သတ်ထားပါသည်။
အဆိုပါ Scooter 150 ကီလိုဂရမ်အများဆုံးဝန်စွမ်းရည်နဲ့6°ကုန်းတက်ဦးရေအများဆုံးတောင်တက်စွမ်းရည်နဲ့ 250 ဝပ်လျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter 60-70 ကီလိုမီတာတစ်မောင်းနှင်မှုအကွာအဝေးတစ်ခုဖြုတ် 24 ဩလီသီယမ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ အဆိုပါတာဝန်ခံအချိန်4မှ6နာရီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဖို့တစ်ကားရပ်နားဘရိတ်တပ်ဆင်ထားသည်။
အဆိုပါ Scooter ရှေ့ဘီးတစ် disc ကိုဘရိတ်နှင့်နောက်ဘီးတစ်စည်ဘရိတ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter အိန္ဒိယတွင် 100 ကျော်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကရောင်းချခဲ့သည်။ သွင်းကုန်ကနေတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည် www.uship.com ။
ကို 2020 Avan Motors ကိုမော်ဒယ်များ
Avan Motors ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။